ရှောင်လင်သိုင်းကျင့်စဉ်မှတ်တမ်းဗီဒီယို | Thaing Wizard
Posted on April 24, 2013 by Aung Thu Htet	ဒီတစ်ခါ တင်ပေးထားတာကတော့ Shaolin Warrior Training Documentary Video လေးပါ။ တစ်နာရီခွဲစာ ကြာပါတယ်။ Connection ကောင်းမယ်ဆိုရင် download ဆွဲပြီး သိမ်းထားသင့်ပါတယ်။
This entry was posted in Kung Fu, Martial Arts, Martial Arts Video and tagged ကွန်ဖူး, ဗီဒီယို, မှတ်တမ်း, ရှောင်လင် by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	One thought on “ရှောင်လင်သိုင်းကျင့်စဉ်မှတ်တမ်းဗီဒီယို”	Pingback: ရှောင်လင်လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ် (၇၂) ပါး | Thaing Wizard